Soo dejisan Nymgo 5.5.26 – Vessoft
العربية, English (United States), Français
Soo dejisan Nymgo
Nymgo – software ah haan loogu talagalay isticmaalka taleefanka si ay asxaabtooda ku sugan meelo kala duwan oo dunida ah. Nymgo awood u siineysaa inay u yeedhaan oo SMS u diro macaamiishu ku telefoonka gacanta. Marka la doortay ee dalka qaarkood, software soo bandhigayaa qiimaha halkii daqiiqo ee wicitaan ee ka shaqeeya mobile kala duwan. Nymgo isticmaalaa technology gaarka ah si loo hubiyo in khasaare yar oo tayo leh oo ay tayadoodii isgaarsiinta codka. Nymgo sidoo kale go’aaminaya meesha ugu dhaw ee tirada wacay oo awood u si loo hubiyo ansaxnimada code magaalo.
Ku baaqay in qayb kasta oo ka mid ah dunida oo dhan
Exchange ee SMS
Waxay abuurtaa Kitaabka Cinwaanka
Muujiya ee canshuuraha ee ka shaqeeya mobile
Ogaanshaha ee tirada wacay
Nymgo Software la xiriira:
العربية, English, Français, Español... WeatherBug 10.0.7.4